Macalinka Xulka Qaranka Kubadda Kolayga oo booqasho ku yimid London Login
Current Articles Archives Search Macalinka Xulka Qaranka Kubadda Kolayga oo booqasho ku yimid London
Written by Kubadda at 9:44 PM on Sunday, August 04, 2013 Tweet
Iyadoo wada hadalku dhamaan ayaa waxaa la aadaamay salaadii Maqribka waxaana loo kala yaacay Masaajidka laguna balamay in inta dhiman layskugu soo noqdo bacdal salaat. Qorshuhu wuxuu ahaa salaada ka bacdi in la aado maqaayada lagu magacaabo Woody Grill ee ku tiil xaafadda Willesden Green. Halkaas oo uu macalin Baarajab ka sii watay hadalkiisii asagoo ku dheeraaday sida mustaqbalka kor loogu sii qaadi lahaa horumarkii laga gaaray tartankii Tanzania. Wuxuu yiri waxaa Illaah mahadii ah, tartankii kadib in la helay cayaar yahano ka badan kuwii hore oo tayo wanaagsan leh. Wuxuu yiri mustaqbalka aad ayuu u fiican yahay. Waxaase nalooga baahan yahay in aan galno diyaar garoow aad u sareeyo.
Cumar wuxuu kaloo sheegay in maamulka cusub ee xiriirka kubadda kolayga dhawaanta lagu dhawaaqay uu yahay mid lagu farxo. Waayo xubnaha badankoodu waa kuwo ka soo jeedo bahdii kubadda kolayga haday noqon lahayd xagga garsoorka, macalimiinta ama cayaartooydii hore midba. Waxaana looga fadhiyaa dadaal iyo isbedel dheeri ah. Goobta oo ahayd mid ay ka muuqato farxad iyo is marxabayn ayaa waxaa lagu ducaystay in dalkii hooyo nabad Allaha ka ansixiyo, ummadda Soomaaliyeedna noqdaan kuwo nabad ku ciida. Intaa kadib wuxuu u mahad celiyay kasoo qayb galayaasha isku imaatinka oo badankooda waqtigooda qaaliga ah u soo huray in ay asaga la kulmaan.
11424 Views :: 379 Comments :: :: Sports News